Cade Muuse Ma Hoogaamiye Siyaasadeed baa, Mase waa Ganacasade? !!
Madaxweynaha Soomaaliya: "Khayraadka Dabiiciga ah ee dalku leeyahay Mas'uuliyadeeda waxaa iska leh Dawlada Dhexe."... GUJI...
Diyaariye : Mohamed Mohamud Osman (Qoordheere )
Email address : mlambo77@hotmail.co.uk
Sida inoo muuqata cade muuse oo ah madaxwaynaha Dowlad Goboleedka Puntland ayaa malmaahaan dambe waxaa uu noqday Gacsade waayo waxaan aragnaa oo lawada socnaa cade in uu ka gatay dhulkii umada reer puntland dad shisheeye mana ah mid dan u ah umada reer puntland.
Wakhtigaan lajoogo ayaa puntland waxaa iska soo daba dhacaya eedaymo loo jeedinayo Madaxwayne cade muuse Xirsi oo gadashada dhulka reer puntland oo ka gatay dalal shisheeye.
Intaa waxaa sii dheer Puntland oo lagu aqoon jiray Nabad ,Horumar iyo Kaladanbayn ayaa waxaa hada soo ifbaxay in ay baa ba'ado nabadii ka jirtay puntland iyo Kaladanbaytii , Taasna waxaa sabab u noqday doorashadii lagu soo doortay cade muuse in noqdo Hogaanka Dowlad Goboleedka Puntland.
Balse nasiib daro umada reer puntland oo islahaa markii hore Cade muxu ka bedeli doonaa puntland ,Ma puntland buu ka dhigi doonaa dowlad hurumarsan mase waa iibsandoonaa ??!!!!
Ka dib intaas cade ayaa noqday mid Ka ganacsada Dhulka reer puntland ,Tusaale ahaan waxaa idinku filan :-
Waxaa jirtay mashruucyo loogu tala galay in lagu dhiso Airporka Boosaso & waynaynta Dekeda Boosaaso .
Dhamaan mashruucyadaa ayaa noqday kuwa aan soo dhaafin Madaxwayne cade muuse ,Halkaas oo ka bilaabay ganacsi in uu iibsado dhulka ,Dadoow ma lagu tageersan yahay cade in uu noqdo Ganacsade ka ganacsada Dhulka Reer Puntland ?. Mase waxaa lagu raacsan yahay in aan la dhisin ama lawaynayn Dekeda Boosaso iyo Air porka Boosaaso ?/.
Ugu danbaytii waxaan umada reer puntland u soo jeedinayaa in ay ilaa shadaan dhulkooda kana soo horjeedsadaa hadba qofkii raba in uu Lagalo Dalal shisheeye Ganacsi aan la ogayn ama aan lala saxiixin ,Fikrad ahaantayda waxaan u arkaa mid aan soconayn wana ka so horjeeda fikirkaa uu wado cade muuse.
Waxaa la Rabaa in dadka reer Puntland laga hor istaago khayraadka dhulkooda ku Jira ee ay Gaajadu ka hayso...